Vagadziri vekumusoro-kwekudzivirira kwepombi michina -Shanghai Jwell Machinery - CHINA JWELL Machinery Co., Ltd.
Vagadziri vekumusoro-soro kwekudzivirira kwepombi michina---Shanghai Jwell Machinery
Nguva: 2018-11-04 Hits:
JWELL kambani inoshingaira inopindura kumusika kudiwa, uye kamwe zvakare ita kugadzirwa mutsetse guru dhayamita 2 metres kuputira mutopota extrusion mutsetse.
Parizvino, Shanghai JWELL Pipe Equipment Kambani yakaenderera ichipa mitsara gumi nemana yekugadzira yemamita maviri super-hombe dhayamita yekuisa pombi kumusika. Iva neyakakura kwazvo dhizaini yekugadzira uye yakagadzikana michina mhando!
Super hombe caliber 2 metres PE thermal kuputira pombi yekugadzira mutsetse iyo inogadzirwa muShanghai JWELL Pipe EQUIPMENT CO., LTD, vane chinzvimbo chinotungamira muindasitiri, uye dhizaini yacho yakasarudzika uye inoverengeka. Tora yakakwirira kunyatsoshanda imwe sikuruu extruder, yakakwira degree of otomatiki, nyore mashandiro, kuenderera kugadzirwa, kugadzikana uye kwakavimbika.Nekuda kwekushandisa michina kugadzikana, yakakura ruzivo, vatengi vanogutsikana kwazvo.
Pe yekudzivirira pombi inonziwo PE yekunze yekudzivirira chubhu, bhachi chubhu, sleeve chubhu .Direct kuviga PE kuputira pombi inoumbwa yakakwira density density polyethylene yekunze yekudzivirira dura, polyurethane yakaoma furo epurasitiki kuputira zvinhu uye simbi pipe. iyo density iri 60kg / m3 ~ 80kg / m3, zadza zvakakwana mukaha uri pakati pesimbi pombi uye casing pombi, uye uine imwe nhanho yesimba rekunamatira. Gadzira yakasimba zvachose pakati pesimbi pombi, yekunze chubhu uye yekudzivirira dura. Furo rePolyurethane rakanyatso kuvigwa insulating pombi ine yakanaka michina uye yekupisa yekuisa zvivakwa. Pasi pemamiriro ezvinhu akajairika, inogona kumira tembiricha yakakwira ye120 ° C uye inogona kumira tembiricha yakakwira kusvika ku180 ° C kuburikidza nekushandurwa kana kusanganiswa nezvimwe zvinodzivirira.Inoshanda kune akasiyana siyana echando, anopisa mvura, yakakwira uye yakaderera tembiricha yepombi yekuisa kweinjiniya.
Chigadzirwa hunhu hwe PE kupisa pombi
Inoshandiswa zvakanyanya mune mvura, gasi kutapurirana network, chemakemikari pombi yekuisa injinjini peturu, makemikari, epakati kudziyisa network, centralair yekugadzirisa mweya wechipombi uye weinjiniya mainjiniya.
● Mari yeprojekiti yakaderera.
● Kugara kwenzvimbo zvishoma, kuvaka nekukurumidza uye kuchengetedza zvirinani zvirinani.
● Jacket chubhu inochengetedza simba, kuchengetedza, kuputira kwakanaka uye hupenyu hurefu hwebasa.
● Tambo dzese dzekudonha dzakapihwa kuchengetedzeka. Kana iko kuburitswa kukaitika kumwe kunhu mupayipi, kuburikidza nekuitiswa kwetsamba yetsamba, nzvimbo chaiyo nedhigirii rekudonhedza kwepombi yekudzivirira inogona kuratidzwa pachiridzwa chakakosha chekuyedza, kuitira kuzivisa vashandi vari kudonha kuti vagadzirise pombi inodonha nekukurumidza uye simbisa kushanda kwakachengeteka kweinodziya network.
JWELL kuputira pombi yekugadzira mutsara kuita
1.Iyo extruder inoshandisa dhizaini nyowani yeakanyanya kushanda imwechete sikuruu, tangisa iyo yepamusoro tekinoroji kugadzira kubva kunze kwenyika. Mota inotyairwa, Nokia PLC processor, ita shuwa kuti mashandiro emidziyo akatsiga uye akavimbika. Yekuchengetedza tembiricha yekudzora sisitimu ine Nokia Ye PLC yekudzora system uye yekuwedzera module. Kupisa kwekushisa kudzora kunogona kudzorwa pa ± 0.5 ° C.
2.Foroma anoshandisa zononoka mamiriro, yepamusoro chiwanikwa simbi nokuchengetedza; Tembiricha kudzora chakuvhuvhu chinoumba vave nemagetsi kudziyisa .Temperature kuzvidzora vane mukuru nemazvo, mafuta mutungamiriri mhangura chubhu haangavi aggregate kabhoni. Kuchenesa mhete kugovera mune imwe nzvimbo, tembiricha kugadziridzwa kwenzvimbo yega yega yeforoma inodzora.
3. Iyo yekugezera tangi yakasarudzwa modular dhizaini. Iyo flange yebhokisi rekusimudza bhokisi uye yebhokisi rekusvina rakagadzirwa nesimbi isina simbi. Iyo kamwene inotora inokurumidza shanduko yemhando jojoint, iri nyore pakuchenesa uye kutsiva, uye inokunda iyo mitezo yekumisikidza kumisikidza uye disassembly.
4. Caterpillar mhando dhonza kunze muchina, zviri nyore mashandiro, kushoma kuraswa kwepombi, uye hombe traction, yakagadzikana kushanda.
5. Kucheka muchina wekudya ruoko unotora simbi simbi, yakasimba simba, uye yakasimba.
Kubva payakatangwa, Shanghai JWELL Pipe Equipment Co., Ltd. yakanangana nezvinodiwa nevatengi, ikabatanidzwa nezvakanakira zvigadzirwa zvepombi zvepamba kumba nekune dzimwe nyika, yakaomarara toprovide yakakwira-inodhura michina kumusika, uye inogara ichisangana nezvinodiwa zvevatengi zvevatengi, suma yepamusoro yekugadzira tekinoroji uye epamberi dhizaini dhizaini kune vanogumira vatengi.
KUMASHUREJwell Mashini anobatsira kuvaka girini gungwa rezvipfuyo!
NEXTSuper PPR Fibhi Girazi Pipe Line Yeyedzo Zvakabudirira